ENHLIZIYWENI YE-CHAMPAGNE - I-Airbnb
Broyes, Champagne-Ardenne, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Marie-Dominique
U-Marie-Dominique uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-91% wezivakashi zakamuva.
Uma ufuna ukuphumula engadini evaleke ngokugcwele noma eduze kweziko noma uma ufuna ukuvakashela i-Champagne lena yindawo yakho.
Asikho isidingo sokuthatha amashidi noma amathawula akho konke kuhleliwe. Umbhede omkhulu futhi ontofontofo kakhulu ukulindile. Igumbi lokugezela elineshawa, indlu yangasese...
Ikhishi likulungele ukuba ulenze , i-microwave oven, i-electronic hob zikhona kuwe.
Inani lihlanganisa ukuhlanza .
Indlu encane ebukekayo esenkabeni ye-Broyes ku-Niver Touristique de Champagne. I-Broyes yidolobhana elinomlando elibheke izivini ze-champagne nesonto elihlaba umxhwele lekhulu le-16 elitholakala ngokuqondile phambi.
Le ndawo yokuqasha yikhaya elinekamelo lokulala elilodwa nekhishi/igumbi lokuphumula, indawo yokubasa umlilo, ithelevishini, ikamelo lokulala elinombhede omkhulu, indlu yokugezela eneshawa nendlu yangasese, kanye nengadi ye-patio yangasese enetafula, izihlalo nendawo yokosa inyama exhunywe ekamelweni lokulala. Inefenisha nama-heirlooms omndeni nama-antiques, leli khaya lenzela okokuzithokozisa kwangempela kwase-France.
Lena indawo ekahle kakhulu yokuvakashela indawo ye-Champagne. Iklanywe ezivinini futhi iseduze nawo wonke amaseli adumile e-Epernay nase-Reims (Veuve Cliquot, Moët...) le ndawo yenza kube lula ukuthenga yonke i-Champagne oyithandayo ngisho nalabo abangaziwa kangako.
Iqhele ngemizuzu engu-10 yidolobha elihle lase-Sezanne lapho uzothola khona ama-boulanger amangalisayo nezindawo zokudlela ezibukekayo nama-boutique. Igcwele izakhiwo ezinhle nabantu abanobungane, leli dolobha elincane liyigugu esifundeni sase-Champagne.
4.84 · 153 okushiwo abanye
Ngiyaqonda kakhulu, kodwa ungangithemba njalo ngoba ngihlala khona emgwaqweni.
Inombolo yepholisi: 4659221
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$260.
Hlola ezinye izinketho ezise- Broyes namaphethelo